ELAMAKHOLWA ITHI IPHASIKA LIKHONA – Sivubela intuthuko Newspaper
IQEMBU lezepolitiki lamakholwa i-African Christian Democratic Party (ACDP) esifundazweni iKwaZulu Natal eliholwa uMbhishobhi Eric Manqele lithi liyameseka umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngenkulumo yakhe mayelana nobhubha lwegciwane iCorona Virus.
Leli qembu lithi umengameli akaze asho ukuthi iPhasika alikho kodwa uthe abantu abagweme ukuhlanganyela babeyikhulu ekulwisaneni nokubhebhethela kwalolubhubhane.
“Thina njengamakholwa sithi amakholwa makakhuleke kakhulu kulesikhathi sobunzima. Esikuqaphelayo ukuthi iPhasika likhona kepha kumele abefundisi baqikelele kulokhu okushiwo umengameli ukugwema igciwane leCovid 19. Siyayamukela inkulumo yakhe kodwa njengamaKristu iPhasika lizobakhona futhi lizoqhubeka,” kusho Manqele.
Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa umemezele izinto okumele zenzeke kuleli nezizosiza ukunqanda ukubhebhetheka kwalolubhubhane. Phakathi kwalezinto ukwamukela abantu abasuka emazweni angaphandle, ukugwema ukuthi abantu bahlanganyele babengaphezulu kwe-100, indlela yokubingelelana kanjalo kwavalwa nezikole besikhungo zemfundo ephakeme.
I-ACDP enesihlalo eSishayamthetho saKwaZulu Natal ithe elakuleli maliqaphele ngezinqumo elizithathayo zingaphikisani nentando yeningi.
“Siyanxusa kuhulumeni wakuleli ukuba aqikelele kwizinqumo azithathayo mayelana nalolubhubhane zingagcini sesiphikisana nentando yeningi. Makuqaphelwe ukuthi asenzisi kwamazwe angenawo inkolo,” kuqhuba Manqele.
UManqele ugcizelele ngelokuthi makukhulekwe kakhulu ngoba lokhu okwenzekayo kuyizinkomba zokuthi uNkulunkulu khona akusolayo.